Amadolobha amahle asogwini amahle e-Andalusia | Izindaba Zokuhamba
I-Andalusia ngomunye waleyo miphakathi lapho singathola khona izindawo eziningi esingazivakashela, kusuka emadolobheni kuye amadolobhana amancane athandekayo, futhi ikakhulukazi izindawo ezingasogwini lapho ungajabulela khona isimo sezulu esihle. Yingakho sizobheka lawo madolobha amahle asogwini atholakala e-Andalusia.
I-Los amadolobha asogwini e-Andalusia Basinikeza izikhala eziningi ezinhle futhi, ngaphezu kwakho konke, amabhishi amahle wokuthamela ilanga. Amanye ala madolobha asogwini asilethela izithombe ezijwayelekile ze-Andalusia, futhi ngokuvamile zonke ziyindawo yokuvakasha, ngoba alikho ikona laleli zwe elinobungani elingaziwa.
7 IConil de la Frontera
Siqala ngomuzi osilethela i- isitembu esivamile emadolobheni amahle kakhulu e-Andalusia. Izindlu zabamhlophe zimboza phezulu kwentaba ebheke olwandle futhi ekugcineni kweSierra de Cabrera. Lidolobha elihle kakhulu, linezindlu ezimhlophe ezikhazimulayo esezivele zimile amakhulu eminyaka, futhi eselibonile amadolobha amaningi edlula, kusuka kwabaseFenike kuya kumaRoma. Enye yezinto okufanele yenziwe kuleli dolobha ukulahleka emigwaqweni emincane, ukujabulela okumhlophe kwezindlu ngokungafani nombala oluhlaza okwesibhakabhaka nezimbali ezimibalabala kumabhalkhoni. Umthombo waseMora ungenye yezindawo zawo zomlando, lapho leli dolobha lanikezelwa khona eMakhosini amaKhatholika. Ungaphinde uhambe ngokuhamba ngomzila weLa Mena, obheke olwandle.
INíjar yidolobha elincane, yize isikhathi sikamasipala sibanzi. Ungomunye umuzi wezindlu zabamhlophe osogwini, eduze kwalona odumile Ipaki yemvelo yaseCabo de Gata. Ukusuka kule ndawo ungavakashela ugwadule lwaseTabernas, lapho kumabhayisikobho e-cowboy adlule aqoshwa khona. Leli dolobha linendawo yokuvakasha enamabhishi amahle aseduze, yize ifa lamasiko liyindlala ngenxa yokuthi liyindawo eye yaphangwa izigebengu amakhulu eminyaka. Lo mlando oneziyaluyalu, nokho, awuwukhululi ekubeni idolobha elihle manje elijabulela umsebenzi omuhle wabavakashi.
INerja yidolobha elaziwa eSpain ngokuba yindawo lapho kwathwetshulwa khona iziqephu eziningi zochungechunge lwenganekwane oluthi 'Verano azul'. Uma sizovakashela leli dolobha futhi singajabulela izinkambo eziqondisiwe ukubona izilungiselelo lapho lezi zigcawu zithwetshulwe khona. Ngaphezu kwalokho, kunomfanekiso womkhumbi omkhulu waseChanquete. Enye yezinto zasenganekwaneni ezingenziwa kuleli dolobha ukuthi vakashela i-Balcony yase-Europe, enemibono emangalisayo yolwandle. ICueva de Nerja kungenye yezinto okufanele zivakashelwe, futhi maphakathi nedolobha singajabulela izindawo zokudlela ezijwayelekile nezitolo zezikhumbuzo.
Lokhu kungenye yamadolobha amahle ase-Andalusia, anezindlu ezinhle ezimhlophe ezihlotshiswe ngezimbali nezitsha zobumba. Kule ndawo ungajabulela ukubukwa okuhle kolwandle, kanye nenqaba esendaweni ephezulu yedolobha, lapho kukhona khona ukubukwa okumangazayo. Kuyinto Isigodlo samaMoor kusuka ngekhulu le-XNUMX phezu kwedwala okwakuthi ngezikhathi zikaNasrid kwakuyijele lobukhosi. Eduze kwenqaba kunesonto laseVirgen del Rosario, umsebenzi waseMudejar kusukela ngekhulu le-XNUMX.
ITarifa ingenye yezindawo eziheha kakhulu e-Andalusia, ngakho-ke sinenye yalezi zindawo okufanele uzivakashele okungenani kanye. Kule ndawo kukhona Amabhishi aseBolonia naseValdevaqueros. Sizobona ukuthi iTarifa iyona mecca yezemidlalo yamanzi, enamakhulu ama-kitesurfing kites akhuphuka esibhakabhakeni. Ngaphezu kwalokho, singenza ukuvakasha okuthokozisayo, okufana neGuzmán Castle kusukela ngonyaka ka-960 okusalondolozwe kahle. Jabulela imibono emangalisayo ye-Mirador del Estrecho, lapho singabona khona ugu lwase-Afrika.
I-Estepona ingelinye lalawo madolobha anentelezi yase-Andalusi engenakuqhathaniswa. Indawo yokuhamba buthule emigwaqweni yayo, ujabulela wonke amakhona amancane. I- Imbali Yesikwele edolobheni lakubo elidala lihlala ngokuvumelana negama lalo, linezimbali ezinhle ezinemibala elihlobisa ngendlela enhle kakhulu. Futhi singavakashela ezinye izikhumbuzo engxenyeni yakudala, njengeCastillo de San Luis. Kungenzeka ukujabulela intambama emnandi eSelwo Aventura, e-zoo, noma uvakashele isikhungo sobuciko samahhashi.
IConil de la Frontera
E-Conil de la Frontera kungenzeka ukujabulela indawo ethule eduze kwama-coves namabhishi amahle. Idolobha elidala lihle kakhulu, nge- izindlu ezijwayelekile zabamhlophe ezinamagceke angaphakathi, ihlotshiswe ngamabhodwe agcwele izimbali. Ezinye izinto ezingenziwa kuleli dolobha, ngokwesibonelo, ukuvakashela indali yezinhlanzi ethekwini, bese unambitha i-tuna ogibeni. Iya emakethe yokudla ukuze ubone imikhiqizo yabo ejwayelekile futhi uthenge ngezinsuku zemakethe. Akufanele uphuthelwe yizinsuku ezinelanga ebhishi laseFontanilla naseCala de Aceite.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Amadolobha amahle asogwini e-Andalusia
Izizathu ezi-5 zokuya eMali uyofuna ukuzijabulisa